सम्बन्धविच्छेदको ८ वर्षपछि दोस्रो विवाह गर्दै करिष्मा कपुर ! - nepal day
प्रकासन मिति : २९ बैशाख २०७९, बिहीबार १३:१२
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री करिष्मा कपुर हालै आफ्ना प्रशंसकहरुसँग सामाजिक सञ्जालमा ‘आस्क मी एनिथिंग’ सेसनमार्फत जोडिइन् । दर्शकसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत जोडिएकी उनले व्यवसायिकदेखि व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएका प्रश्नको पनि जवाफ दिइन् ।
प्रशंसकहरुले उनीसँग सोधेका थुप्रै रमाइला व्यक्तिगत प्रश्नमध्ये विवाहका लागि सोधिएको प्रश्नले विशेष ध्यान खिच्यो । प्रश्नोत्तरकै क्रममा एक प्रशंसकले उनलाई के तपाईं दास्रो विवाह गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । करिष्माले प्रश्नलाई इगनोर नगरेर रमाइलो शैलीमा जवाफ फर्काइन्, जुन जवाफ उनले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा समेत सेयर गरेकी छन् ।
यसको जवाफ दिन करिष्माले एउटा कन्फ्युज देखिएको एउटा अनुहारको तस्बिर सेयर गरिन । जसको उत्तरमा उनले ‘डिपेन्डस’ मात्रै लेखेकी छिन् । करिष्माको उत्तरले दोस्रो विवाह हुँदैन भनेर नकारिएको छैन ।
अभिनेत्री कपुरको सन् २००३ मा सञ्जय कपुरसँग विवाह भएको थियो । उनीहरुका दुई सन्तान समायरा र कियान छन् । यद्यपि, उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध धेरै टिक्न सकेन र सन् २०१४ मा सम्बन्ध विच्छेद भयो । नवभारत टाइम्स